Barcelona oo keentay qorshe ay Andre Gomes u adeegsanayso saxiixaMesut Ozil | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Barcelona oo keentay qorshe ay Andre Gomes u adeegsanayso saxiixaMesut Ozil
(19-11-2017)Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay sarre u qaaday doonisteedii ay ku dooneysay kubadsameeyaha Arsenal Mesut Ozil iyagoo ku dalbaday Andre Gomes inuu heshiiska qayb ka noqdo inta uusan heshiis cusub u saxiixin kooxdiisa.
Ozil ayaa qandaraaskiisa haatan uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan, Arsenal ayaana la fahamsan yahay inay dooneyso inay lacag kaash ah kula soo wareegto xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka bisha Janaayo, ka hor inta uusan si xor ah uga tagin xagaaga soo aadan.
28-jirkaan ayaa waxaa uu diiday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda ka dhisan Emirates Stadium, waxaana si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United todobaadyadii la soo dhaafay.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska Spanish-ka Don Balon ayaa sheegay in Barcelona ay diyaar u tahay bisha Janaayo islamarkaana ay diyaar u tahay inay Gomes u soo bandhigto qeyb ka mid ah heshiis kasta oo laga yaabo inay dhici karto. Hogaamiyaasha La Liga ayaa la fahamsan yahay inay arkeen Ozil inay bedeli karaan Philippe Coutinho, oo ay ku guuldareysteen inay ka fariistaan ​​Liverpool xagaagi